မနေနိုင်လို့ရှယ်ပါတယ်ဗျို့…Myanmar Yang Tse Copper Limited-MYTCL | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » မနေနိုင်လို့ရှယ်ပါတယ်ဗျို့…Myanmar Yang Tse Copper Limited-MYTCL
မနေနိုင်လို့ရှယ်ပါတယ်ဗျို့…Myanmar Yang Tse Copper Limited-MYTCL
Posted by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် on Mar 19, 2013 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Politics, Issues | 18 comments
ပွစိ ပွစိ ဖတ်စေချင်လို့ပါ လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စ
အခုတလော ဂဇက်ရွာထဲမှာရော…အပြင်မှာရော…ဖေ့ဘုတ်နဲ့ မီဒီယာလောကမှာပါ
သူ့ကို ကြိုက်ပြီး ထောက်ခံသူတွေရှိသလို၊ သူဦးဆောင်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်ပြီး
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ…ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ သူတာဝန်ယူခဲ့တဲ့
ကိစ္စကို သူအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ…ထွက်လာတဲ့ ရီဇတ်အပေါ် ကျေနပ်ကြတာ၊
ဦးဆောင်နေသော သံဃာတော်များနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒါကို အသေးစိတ် ရုပ်သံနဲ့ ကြည့်ရတဲ့လူလည်းရှိမယ်…စာစောင်တွေထဲ ဖတ်ရသူလည်းရှိမယ်
မဖတ်ဖြစ်သေးတဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်…ရွာထဲက မဖတ်လိုက်ရသေးတဲ့ လူတွေ
Messenger News Journal Facebook စာမျက်နှာမှာတင်ထားတဲ့ အပြန်အလှန်
မေးမြန်း ဖြေကြားချက်တွေကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်…..
ဦးဆောင်နေသော သံဃာတော်များနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆွေးနွေး
တင်ပါ့ဘုရား၊ ကျေးဇူတော်ကြီးလှပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်မ လျှောက်ချင်တာက အတိတ်က ကိစ္စတွေ ကိုကျတော့ ဖြစ်ပြီးတာကို မဖြစ်ပါနဲ့လို့ လုပ်ဖို့က မြတ်စွာ ဘုရားတောင် မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အနာဂတ်မှာ ပြုပြင်ဖို့ဆိုတာ တပည့်တော်မတို့အနေနဲ့ ဒေါသကိုခံပြီးတော့ လုပ်လို့မရပါဘူး။ အားလုံး အချင်းချင်းမှပဲ …
သမီးတို့က ဘယ်လိုလဲဆိုတာ့ အမေပြန်လာလို့ စာအုပ်ဝယ်လာပြီး မုန့်မဝယ်လာသလိုဖြစ်သွားတာ။ စာ အုပ်က ရေရှည်အတွက် အဖိုးတန်တယ်” မုန့်ကခဏပဲ။
အမေပြောပြီးပြီပဲ။ ဒီကိစ္စကို ဘာလို့ထပ်တလဲလဲ ရှင်းပြရမှာပဲ။ စပယ်တောင်၊ ကြေးစင်တောင်က ဒီစီမံ ကိန်းနဲ့မဆိုင်ပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ ဘဝတွေကို လုပ်ပေးပါမယ် လို့
ဒါလေးကိုအသေးစိတ်ဖတ်ကြည့်ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သဘောထားနဲ့ရပ်တည်ချက်ကို
ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်နိုင်သလို….ဒေသခံအမျာစုက အစီရင်ခံစာကိုတောင်သေသေချာချာ
ကြေးမုံသတင်းစာမှာ အသေးစိတ် အစီရင်ခံစာကိုဖတ်ချင်ရင်တော့..ဒီအောက်ကလင့်မှာ
pdf ဖိုင်နဲ့ ဒေါင်းလုပ်နိုင်ပါဂျောင်းး
ထောက်ခံတာ မထောက်ခံတာကတော့ မိမိတစ်ဦးချင်းစီ၏ သဘောသာဖြစ်ကြောင်းပါ
စိတ်တိုရင် ဆဲချင် ဆိုချင်တာတွေက လည်း အကျင့်ဆိုးကြီးကလား။
စိတ် ထဲမှာ မြိုချလိုက်ပြီ။
ဟိုဘက်မှာ တနေ့က တဂျီးမင်းတင်ထားတဲ့ ဆရာမ မျိုး ပို့(စ) ကို ဖတ်ပြီးသွားလို့။
ဦးဆုံးဝင်ဖတ်ပီး ကွန်မင့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးကျေးပါဗျာ…
ဘာမှအကြောင်းပြစရာမရှိလို့ တောင်ကြီးကို ချစ်တယ်၊ချစ်လို့ ဆိုတဲ့
ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးစကားကြီး အလွတ်ကျက်ပြီး ခါတော်မီထပြောတာ
ကိုယ်နာမည်ကြီးအောင် ဖြတ်လမ်းနည်းသုံးပြီး နိုင်ငံရေးနယ်ထဲဝင်ရအောင်
ပြည်ပသတင်းဌာနတွေနဲ့ အင်တာဗျူးပြီး ခါတော်မီသူရဲကောင်းလုပ်ပြသူတွေကို
ဒါမှ မေ့လောက်ပြီထင်ပြီး နောက်ဖေးပေါက်က စင်ပေါ်တက်လာရင် သတိပြုမိမှာဖြစ်ပါတယ်။
သမီးတို့က စာမဖတ်တတ်တော့ ဖတ်မကြည့်ဘူးပြောတယ်…
သမီးတို့ အရပ်ပြောနဲ့ပြောရင် တောင်ယာ လုပ်စားချင် တယ်ဆိုတာလဲ သမီးက ဘွဲ့ရပြီးပြီ အလုပ်ကမရဘူး။
ဒီတောင်ကို ဖြိုလာတာ အခုမှလဲမဟုတ်…
လက်ရှိကိုပဲ ဖက်တွယ်ပြီး… အနာဂတ်ကိုမတွေးတဲ့ဦးနှောက်တွေ…
ကမ္ဘာကျော် နိုင်ငံရေးဂေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့ ဒေသခံကျေးလက်ပြည်သူ၊ လှုပ်ရှားတက်ကြွသူအချို့ အပြန်အလှန်ပြောတာကို ဝိတ်ခြင်းယှဉ်မသင့် ထင်တာပဲ။ ယေဘူယျ ဖတ်လိုက်တော့ ဘွားဒေါ်ဂျီး တရုတ်ဖက် သိပ်လိုက်လွန်းလို့ ဖြစ်ကုန်တာ ပြောချင်တယ်။ အစီရင်ခံစာရေးစဉ် တရုတ်၊ ဦးပိုင်၊ အစိုးရနဲ့သာ ကန့်လန့်ကာနောက် တိုင်ပင်ပြီး ဒေသခံအဖွဲ့စည်း လှုပ်ရှားသူတွေကို မျက်ကွယ်ပြုထားပုံရတယ်။ အဲဒါ ဘွားဒေါ်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးကြည့်ရင်ကောင်းမယ်။ ပြီးစလွယ်တော့ မပြောနဲ့နော် မေမေစု၊ မှတ်တမ်းဗျ မှတ်တမ်း။ ဘွားဒေါ်ဖြေတာတခုမှာ အတိတ်ကို ထားခဲ့၊ ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အနာဂတ် ဦးတည်ရအောင်ဖြေတယ် – ရွာသားတွေက အစိုးရကို မယုံလို့ပြောတော့။ သူပြောတဲ့ အတိတ်ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၂၅လည်းအတိတ် (၁၉၈၈) ငါးနှစ်လည်းအတိတ် (ရွှေဝါရောင်၊ နာဂစ်မုန်တိုင်း၊ အခြေခံအုပဒေ) နှစ်နှစ်လည်းအတိတ် ရွေးဂေါက်ပွဲ၊ ငါးလလည်းအတိတ် (လက်ပံတောင်ဖြိုခွဲမှု) တလလည်းအတိတ် (မအူပင်လယ်သမားအရေး) ဆိုတော့ ဘာကျန်သေးတုံး။ အဲဒါ နိုင်ငံရေးသမားစကား ဥပမာပဲ။ မှားတယ် မပြောဘူးနော်၊ နိုင်ငံရေးသမား သူ့အလုပ်သူလုပ်တာ၊ အဲဒါကို ဘုရားတဆု ဂူတလုံး ကိုးကွယ်နေတာ ကာကွယ်နေတာ အမွှမ်းတင်နေတာကို လက်မခံတာ။ မင်းကိုနိုင် မော်နီတာ ဂျာနယ် အင်တာဗျူးမှာ သူက အစီရင်ခံစာမှာ ဆူပူဆန္ဒပြတယ် သုံးတာ မှားတယ်။ ရိုးရိုး ဆန္ဒပြတယ် သုံးရင် မရဘူးလားတဲ့။ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်ဆီးမှု အတော်များများ ဖုံးကွယ် လျော့ရေးထားတယ်တဲ့။ ဆန္ဒပြသူတွေကို အပြစ်တင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိရဲတွေ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ လေ့ကျင့်မှု အားနည်းလို့ ကာကွယ်ပေးထားတယ်။ ဘယ်သူပစ်မိန့်ပေးလဲ မရေးထားဘူး။ မီးခိုးဗုံးနဲ့ မီးလောင်ဗုံး မရှင်းမရှင်း လုပ်ထားတယ်။ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ခေါင်းဖင်ကျိန်းရမှာ ဘွားဒေါ်ဂျီးက စေတနာ့ရှင် ဝင်လုပ်ကယ်တော့ ခံပေါ့ဗျာ ဒီလောက်တော့…
Local residents(villagers) are honest and sincere basically.They have only few knowledge.They have been used by politician as stepping-stone.
ဒီနေရာမှာ အစီရင်ခံစာနဲ့ပါတ်သက်ပီး ကိုမင်းကိုနိုင်ပြောတာလေးလည်း
လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်ကဲ့သို့ ထင်မြင်သုံးသပ်သည်ကို သိရှိနိုင်ရန် The Messenger ဂျာနယ်မှ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ကို တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
ကျုပ်ကတော့ ရွာသူားတွေကိုပဲ သနားမိတယ်
ဘာစာမှလဲ မဖတ်တတ် ၊ ဖတ်တတ်တဲ့လူကြတော့လဲ စာကို သေချာမဖတ်
ပွဲလန့် တုန်းဖျာခင်းတဲ့ မအေxိုးတွေ စကားနားဝင်ပြီး
ကဲ…အခု… အဲ့မှာ အလုပ်မရှိပဲ ဆန္ဒပြနေတဲ့ တစ်ကယ့်ရွာသူားတွေကို ထမင်းကျွေး ၊ ဆန်ဆီဆား ထောက်ပံ့ နေတဲ့ အဲ့ဒေသနားက စေတနာရှင်တွေ က စေတနာတုံးရောပေါ့
ကြေးနီတောင်စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပီး ကျုပ်မှာလည်း နစ်နာမှုတွေရှိတယ်…..ကျုပ်ကမုံရွာကဆိုတော့..
ဟိုးးး အရင်က ကျုပ် လက်ပံတောင်းက မဒီကညာတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ကြိုးသွယ်ကြတယ်ပေါ့…..
အခုကြေးနီတောင်စီမံကိန်းလုပ်တဲ့ နေရာဝန်းကျင်မှာပဲ သစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာ မကြာခဏ
ချိန်းတွေ့ဖြစ်ကြတယ်……. အခုစီမံကိန်းကြောင့် အဲ့ဒီသစ်ပင်မရှိတော့ဘူး…………..
အဲ့ဒါ ကျုပ်လည်း ပြည်သူပြည်သား တစ်ယောက်အနေဖြင့် နစ်နာမှုရှိခဲ့တယ်……………
အဲ့ဒါကို ဘယ်လိုပြန်လုပ်ပေးမယ် ဆိုတာ အစီရင်ခံစာထဲမှာ မပါဘူး………………….
ဒါ့ကြောင့် ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပီး မကျေနပ်ဖူလို့ပြောချင်တယ်……………………
ဖတ်ရတာအလွန်ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ သတိထားမိတာကတော့ ” ဦးဇင်းက တရားကို ဘေးချိတ် ဥပဒေကို ပြောမယ်တဲ့လား ကျွန်နော်တို့နဲ့ သိတဲ့ဘုန်းဘုန်းကြီးများ ကြားရဖတ်ရရင် အလွန်ဒေါသထွက်မယ်ထင်တယ်။ဆန့်ကျင်ဦးဆောင်သူကလဲ စာသေချာမဖတ် မလေ့လာဘဲ လူတွေကိုသွေးဆူအောင်သပ်သပ် လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပါလား။
အံ့သြစရာပါဘဲဗျာ နိူင်ငံရေးကိုစနစ်တကျနဲ့ လုပ်တတ်သူတွေ အများကြီးလိုမယ်ထင်မိပါတယ်။
အော် တောသူမ တဲ့.. အမေစုလို အင်တာနေရှင်နယ်နောလေ့ခ် ရှိတဲ့သူတောင် တခွန်းမခံပြန်ပြောနိုင်တယ်နော်………. ဟေဟေဟေ့ အာဂ တောသူမ ပဲ… (နွယ်ပင်မဟုတ်)…..
တကယ် တောသူတောင်သားတွေဆို ထွန်းဂျစ်တောင် စလုံးမပေါင်းတတ်ကျတာတွေ ရှိတယ်……
တကယ်လိုအပ်နေသူတွေ ကို ထိထိရောက်ရောက် ကူညီစောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေ လို.ပဲ စုတောင်းရတော့တာပဲဗျာ……….
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာ နားမလည်နိုင်တော့ဘူး လိုက်လို့မမှီနိုင်တော့ပါဘူးဗျာ။
အဲလို ပြောဖို့ကို တမင်မပါဘဲ နေတာလေဗျာ.. အန်တယ်ဂျီးတို့ကလည်း ခြစ်မိတာနဲ့ တဂိုလုံး ပုံအပ်တော့တာကိုး… တဝက်လောက်ပဲ စရံသတ်ရတယ်ဗျ။
ကြာရင် တစ်ရွာလုံးနဲ့ ဦးကြောင် တစ်ဖက်စီ ဖြစ်တော့မယ်။
power balance လုပ်ပေးနေတာထင်တယ်။
ပါဝါချိန်ခွင်လျှာညီအောင်.. ကျုပ်က..ကိုကြောင်ကြီးဖက်က.. ၀င်ပါရေးမလားတွေးနေတယ်ဗျို့..။